gTune music download - Min Oaker
Application gTune music download
by မင်းခန့် (Second-E) ဘီလူးကျွန်းသားလေး on 12:38 AM in Application
ကဲအားလုံးပဲ မင်္ဂလာရှိသော ညနေခင်းလေးပါခင်ဗျာ...............
ဒါကတော့ Gtune music download . Apk လေးပါ။ သူကဘာလဲဆိုရင် နောက်ဆုံး Update ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်း များအားလုံးကို ရယူနိုင်မယ့် Apk လေးပါ ၊ English , chines, Japan, US, စတဲ့ နိုင်ငံက နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ သီချင်းတွေကို တင်ထားပေးတဲ့ APk လေးပါ နမည်ကြီးတဲ့ သီချင်းတွေကို စုထားတဲ့ Apk လေးမို့လို့ ဘော်ဘော်တို့ အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပြိး တင်ပေးတာပါ၊ Player ပါ တစ်ခါတည်း တွဲပါ ပါတယ်... ကဲ အောက်က Screen Shot လေးတွေကြည့်ပြီး ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့
Download ပေါ့ဗျာ. .............................
အဆင်ပြေပါစေဗျာ........... အပန်းမကြိးဘူးဆိုရင် သားရဲ့ဆိုဒ်လေးကို ၀င်ပြိးအားပေးသွားပါဦးလို့ (မင်းခန့်.........Second-E) ဘီလူးကျွန်းသားလေး.......... .www.okkitstore.blogspot.com အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပါ အဆင်ပြေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေးသွားပါ့မယ်.. သားနဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက okekarkyawboyfriend@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
By မင်းခန့် (Second-E) ဘီလူးကျွန်းသားလေး at 12:38 AM